Semalt Expert dia manolotra torolàlana iray amin'ny fananganana drafitr'asam-pampidirana mahomby amin'ny mailaka
Ny ankamaroan'ny mpivarotra an-tserasera dia mety manana fotoana iray amin'ny fotoana iray amin'ny fampiasana mailaka ho toy ny teknikan'ny varotra. Ary koa, ny mailaka mailaka dia azo antoka fa ny tetikady ara-barotra amin'ny aterineto mahomby indrindra amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny resany. Ankoatra izany, ny varotra mailaka dia mora haingana sy mora ampiasaina. Mahavariana fa ireo mpanenona an-tserasera dia nanonona akaiky ny 84% amin'ny mailaka rehetra ho toy ny spam na voafafa tsikelikely. Tsy ny mailaka rehetra no mahazo ny vokatra tadiavina noho ny fahadisoana azo alaina mora foana.
Eo amin'izany, i Alexander Peresunko, manam-pahaizana ambony avy amin'ny Semalt , dia mamelatra toro-lalana iray manokana hamantarana ny fahadisoana toy izany ary hanitsy azy ireo araka izany.
Voalohany, avereno jerena ny fotsy. Ny mailaka ara-barotra dia mety hamarana ny lahatahirin'ny spam-n'ny solon'anarana, raha oharina amin'ny sehatra nandefasana hafatra nalefany. Ny mpividy izay tsy voatendry ho an'ny serivisy, fa tsy mandefa mailaka amin'ny vahaolana amin'ny trano amin'ny alalan'ny Outlook, dia tokony handinika ny fananganana serivisy mailaka (ESP). Ny ankamaroan'ny ESP dia manatsotra ny fitantanana ny lisitry ny mailaka ankoatra ny fampivelarana mety ho entina hanatsarana azy.
Faharoa, zava-dehibe ny fandaharam-potoana. Manoro hevitra ny mpividy amin'ny aterineto fa tsy hiala amin'ny mailaka amin'ny ora maraina. Tsy manome antoka izy fa ny mailaka dia hanandratra ny fidirana amin'ny mpandefa iray amin'ny alàlan'ny fandefasana izany amin'ny maraina. Fa ny mailaka tahaka izany dia mety tsy ho hitantsika satria ny mpanjifa dia mety manana mailaka maro isaky ny ora maraina. Ny mahomby indrindra amin'ny fandefasana mailaka ara-barotra dia amin'ny takariva rehefa azon'ny mpizara atao ny manokatra ny mailaka mandritra ny fotoana fohy na fahatelo.
Fahatelo, tena ilaina ny hafanam-po. Ny fandaharam-potoana mailaka henjana dia mety hampidi-doza hatramin'ny fotoana ahafahana mandray olona, ​​ary ny mpanjifa dia afaka manana fotoana fohy..Noho izany dia tsy mety ny mametraka fotoana handefa mailaka mazava amin'ny vondron'olona manokana. Manaova fandaharam-potoana hentitra mba hahazoana tombontsoa lehibe indrindra.
Manaraka izany, manatsara ny toetoetran'ireo mailaka nalefa ho an'ny mpanjifa mba hisorohana ny tsy fijerin'ny mpanavotra. Ohatra, ireo mpivarotra an-tserasera dia tsy tokony mandefa mailaka amin'ny feo mampihetsi-po amin'ireo mpandray. Ary koa, ny anaran'ny orinasa dia tokony hialana amin'ny loha-hevitra.
Tokony haparitaka araka ny tarika tariby ny mailaka ara-barotra. Amin'io fifandraisana io, ny mpivarotra an-tserasera dia tsy maintsy manavaka ny mpanjifa vaovao / mpanjifa vaovao. Ny tsirairay amin'ireo vondrona dia nanondro ny filàna izay tsy maintsy alefa rehefa mandefa mailaka.
Hanatsara ny famakiana ny mailaka nalefa. Maherin'ny telovelezin'ny mailaka rehetra no misokatra amin'ny finday. Noho izany, mba hisorohana mailaka mailaka, ny mpamboly an-tserasera dia tsy maintsy miantoka fa ny hafatra dia azo vakina amin'ny sehatra rehetra. Ohatra, tokony ho mora hita amin'ny sary ny sary.
Teknika iray hafa amin'ny famonoana ny mailaka amin'ny spam dia ny hafatra miaraka amin'ny fitaovana ara-barotra hafa toy ny tranonkala sy ny kaonty media sosialy. Tokony hampiasaina amin'ny sehatra varotra mifandraika amin'ny mailaka ny teny manamarina sy mamorona.
Mamolavola mailaka ara-barotra amin'ny fomba mivarotra. Hafatra fohy na lava no tsy tsara indrindra. Ny mpivarotra kosa dia tokony hampiasa vola amin'ny mailaka izay mivarotra ny vokatra. Ohatra, ireo mpandraharaha amin'ny aterineto dia tsy maintsy manome mpizaka vaovao mavitrika izay mamaritra ny tolotra ary amin'ny teny vitsivitsy.
Farany, ireo mpamboly aterineto dia tsy maintsy miasa amin'ny mailaka protocoles. Ireo dia "mailaka" mailaka maimaim-poana nalefa tamin'ny fomba manokana ho an'ny fanentanana ara-barotra nomena. Tokony hapetraka ny rafitra handefasana hafatra manintona mba hisarihana ny mpamaky. Bola tsara tarehy iray dia singa manan-danja amin'ny fitanana an-tsoratra mailaka mahomby Source .